कसरी यूट्यूबमा धेरै ठूला विज्ञापनहरू छोड्ने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
अनुयायीहरू ➡️ ➡️
फलोअरहरू Buy किन्नुहोस्
प्रेस ESC बन्द गर्न
यूट्यूबमा कसरी धेरै लामो विज्ञापनहरू छोड्ने?
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 323
आज हामी तपाईलाई एउटा अद्भुत युक्ति ल्याउँछौं जसको साथ तपाईं YouTube प्लेटफर्ममा विज्ञापनहरू छोड्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको YouTube प्रिमियम सदस्यता रद्द गर्नु हो, जबकि यसलाई प्राप्त गर्न अर्को स्वतन्त्र तरीका पनि छ।
यो कसैको लागि गोप्य कुरा छैन कि हामी कुनै पनि युट्युब भिडियो खेलिरहेको बेलामा हुने सबैभन्दा कष्टकर चीजहरू यो हो कि प्लेटफर्मले शुरू गरेको धेरै विज्ञापनहरूमध्ये एक देखा पर्दछ। भाग्यवस त्यहाँ तिनीहरूलाई रोक्न एक तरिका छ र आज हामी तपाईंलाई यो देखाउन चाहन्छौं.
लामो YouTube विज्ञापनहरू वेवास्ता गर्नुहोस्
के तपाइँ तपाइँ अनुप्रयोग सबै समय विज्ञापन देखाउन रोक्न चाहानुहुन्छ? यसको निश्चित समाधान भनेको YouTube प्रिमियमको लागि सदस्यता लिनु हो, प्रख्यात स्ट्रिमि video भिडियो प्लेटफर्मको भुक्तान संस्करण। तर लामो भिडियोहरू हेरेकोमा पूर्ण रूपले बेवास्ता गर्न अर्को तरिका पनि छ जुन YouTube भिडियो अघि देखा पर्दछ।
स्पष्ट गर्न पहिलो कुरा हो YouTube मा विज्ञापन बेच्नका लागि धेरै तरिकाहरू छन्, तर सबैभन्दा प्रभावकारी र दोहोरिने एक भिडियो को अघि र पनी विज्ञापन मार्फत हो।
यद्यपि यस प्रकारको विज्ञापन रणनीतिहरू युट्यूबका लागि काम गर्दछन्, सत्य यो हो प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो केहि रमाईलो प्रतिनिधित्व गर्दैन। भिडियो हेरेर र आश्चर्यचकित विज्ञापन भएको कसैको लागि धेरै कष्टप्रद छ। आजको लागि यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि कसरी यूट्यूबमा धेरै लामो विज्ञापनहरू छोड्ने।
छोटो विज्ञापन बनाम लांग विज्ञापन
YouTube मा दुई प्रकारका विज्ञापनहरू छन्। एकातिर हामी ती छोटो विज्ञापनहरू फेला पार्छौं जुन केहि सेकेन्डमा रहन्छ र सामान्यतया यत्तिको आक्रमक हुँदैन। जहाँसम्म, लामो विज्ञापनहरू जसमा एक सेकेन्ड घण्टामा परिवर्तन भएको देखिन्छ पनि प्राय: देखा पर्दछ।
YouTube मा भिडियोहरूको अघि र पछाडि देखा पर्ने विज्ञापनहरू छोटो विज्ञापनको रूपमा हुनु आवश्यक छैन। त्यहाँ केहि मिनेटहरू रहन सक्छ, र ती केसहरूमा यसलाई कसरी हामफाल्ने भनेर जान्न आवश्यक छ ताकि प्लेटफर्ममा धेरै समय बर्बाद नहोस्।
पूर्ण विज्ञापन हेर्न अनिवार्य छैन। त्यहाँ केहि सेकेन्ड पछि विज्ञापन वरपर जानको लागि एक धेरै सरल तरीका छ। यो ट्रिक मात्र ती केसहरूमा कार्य गर्दछ जहाँ विज्ञापनको कुल अवधि seconds० सेकेन्ड भन्दा बढी छ, अन्यथा हामीले विज्ञापन पूर्ण रूपमा हेर्नुपर्नेछ।
युट्यूबमा लामो विज्ञापनहरू छोड्ने चाल
अब हामी लामो-प्रतीक्षित ट्रिकको साथ जाँदैछौं जुन तपाईंलाई ती धेरै लामो विज्ञापनहरू छोड्नमा मद्दत गर्दछ जुन प्राय: YouTube प्लेटफर्मको भित्र देखा पर्दछ। सत्य यो हो कि लामो विज्ञापन छोड्नु कुनै गाह्रो काम होइन।
यस किसिमको केसमा हामीले गर्नुपर्ने काम मात्र बटनमा क्लिक गर्नु हो "विज्ञापन छोड्नुहोस्"त्यो प्लेब्याक विन्डोको दायाँपट्टि देखा पर्दछ विज्ञापनको पहिलो seconds सेकेन्ड पछि बित्यो।
युट्यूबमा लामो विज्ञापनहरू छोड्ने अर्को तरिका पनि छ। तपाईं खेलिरहेको भिडियो बन्द गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अझ दुई पटक खोल्नुहोस्। तेस्रो प्रयासमा भिडियो अब यो विज्ञापनको साथ सुरू हुँदैन।
1 लामो YouTube विज्ञापनहरू वेवास्ता गर्नुहोस्
2 छोटो विज्ञापन बनाम लांग विज्ञापन
3 युट्यूबमा लामो विज्ञापनहरू छोड्ने चाल
12 सक्छ, 2021
कसरी ट्विटर बाहिर जानकारी प्रबन्ध गर्ने?
तपाईको खाताको स्थान जानकारी कसरी प्रबन्ध गर्ने?
इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू $0.00
अनुयायीहरू 😍 $0.00
ट्विटर अनुयायीहरू $0.00
टिक टोक अनुयायीहरू $0.00
फेसबुक अनुयायीहरू $0.00
यूट्यूब सदस्यहरु $0.00
अक्टोबर 2, 2019
इन्स्टाग्रामका लागि पत्रहरू प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्
इन्स्टाग्रामको लागि यी महान नामहरूको साथ लोकप्रिय बन्नुहोस्
सत्यापन कोड बिना इन्स्टाग्राममा लगईन गर्नुहोस्
जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन
फेब्रुअरी 28, 2019
इन्स्टाग्राम अनुयायी जेनरेटर
विश्व पत्ता लगाउनुहोस्
USA यात्रा जान्नुहोस्